ဆီးချိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အလေ့အထဆိုးများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ဆီးချိုသွေးချို » ဆီးချိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အလေ့အထဆိုးများ
ဆီးချိုရောဂါသည် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်သာမဟုတ်ပဲ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်ကျန်းမာရေးကောင်းလိုလျှင် ကောင်းမွန်သော အလေ့အထများကို ပြုလုပ်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် အားထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် ဆီးချိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အလေ့အထများ၊ အကျင့်များ ဖြစ်ပါသည်။
အချိုရည်များကို အထိန်းအကွပ်မရှိပဲသောက်ခြင်းသည် ဆီးချိုရောဂါကို ဖြစ်စေပါသည်။ လူအများစုသည် ဖျော်ရည်များသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေသည်ဟု အထင်မှားနေကြသည်။ လက်တွေ့တွင်မူ အချိုရည်ထဲတွင် သကြားဓာတ်များစွာပါဝင်ပါသည်။ ရေငတ်လျှင် ရေသောက်ခြင်း၊ သကြားမပါဝင်သော လက်ဘက်ရည်၊ ကော်ဖီ သောက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ နောက်အနှစ်နှစ်ဆယ်တွင် အာရှနိုင်ငံများတွင် ဆီးချိုဖြစ်ပွားနှုန်း ၉၀% တက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ဆယ်နှစ်အတွင်းတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဆီးချိုဖြစ်နှုန်း ၂ဆ တက်လာပါသည်။ လူများသည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမIနည်းလာသောကြောင့် အ၀လွန်ခြင်းများဖြစ်လာနိုင်ချေများလာပါသည်။
တစ်နေ့လျှင် ၆နာရီထက်ပို၍မအိပ်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်များကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းချုပ်ရခက်ပါလိမ့်မည်။ အိပ်မပျော်ခြင်းသည် ဗိုက်ဆာစေသော ဟော်မုန်းကို ထွက်စေသောကြောင့် သင့်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန်အိပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အလုပ်ရှုပ်သောကြောင့် သင်သည် မနက်စာ မစားရသည့် နေ့များ ရှိနိုင်ပါသည်။ မနက်စာသည် တစ်နေ့တာတွင် အရေးအကြီးဆုံး အစားအစာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကို တစ်နေ့တာလုံးအတွက်စွမ်းအင်များပေးပါလိမ့်မည်။ မနက်စာလွတ်ခြင်းသည် သင့်ကို အချိန်အများကြီး မသက်သာစေပါ။ ထိုအရာသည် သင့်ကို ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ရန် အကြောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ နေ့လည်စာ မတိုင်ခင်အထိ ဗိုက်ဆာနေခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပြောင်းလဲခြင်းများကို ဖြစ်စေပြီး အင်ဆူလင်ထွက်ခြင်းကို နှောင့်ယှက်ပြီး သကြားဓာတ်ကို တက်စေသည်။
ညစာစားပြီးနောက် အဆာပြေမုန့်များ ထပ်စားခြင်းသည် ဆီးချိုလူနာများအတွက် တားမြစ်ရမည့် အရာဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အဆာပြေမုန့်များသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတက်စေပြီး ညဘက်အစားစားခြင်းသည် သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်ကို တက်စေသည်။ ညစာစားပြီး ထပ်စားလိုလျှင် သစ်သီးအနည်းငယ်ကို သာစားပါ။
ဆီးချိုကို ဖြစ်စေသော အလေ့အထအနည်းကို သိပြီးနောက် သင်သည် ကျန်းမာရေးကိုကောင်းလာစေရန် ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် အဆင့်သင့်ဖြစ်ပါပြီလား။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပိုမို ပြုလုပ်သင့်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များကို သိနေရပါမည်။ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အလေ့အထ ကောင်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေရန် ပြုလုပ်ပါ။
10 Bad Habits That Causes Diabetes.
Accessed on 30 October, 2016
6 Bad Habits to Nix If You Have Diabetes.
https://www.sharecare.com/health/type-2-diabetes/slideshow/6-bad-habits-nix-diabetes – slide-6
. Accessed on 30 October, 2016
10 Bad Habits That Raise Your Diabetes Risk.